Global Voices teny Malagasy · Mey 2020
Janoary 2021 35 Lahatsoratra
Avrily 2016 126 Lahatsoratra
Pejy 2 amin_ny 5
Tantara tamin'ny Mey, 2020
Ekoatora24 Mey 2020
500 isanandro ireo mpifindra monina tonga ao Cúcuta , tanàna iray an-tsisintany, mihevitra ny hody any Venezoelà. Tamin'ny 15 Aprily, 34.000 no fitambaran'ireo olona nandingana ny sisintany nandalo tao amin'ilay tanàna.
Resadresaka niarahana tamin'i Tumi Tanakyuwan, mpikatroka ny fiteny Thau
Mediam-bahoaka23 Mey 2020
Fantaro ary i Tumi Tanakyuwan, ilay hitantana ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline mandritra ny 20-26 May 2020. Hizara ny asany amin'ny fiteny Thau izy, fiteny ampiasaina any Taiwan.
“Mijanona an-trano izahay androany”: ilay hira faneva tsy nampoizina ho an'ny fihibohana noho ny COVID-19 ao Rosia
Eoropa Afovoany & Atsinanana22 Mey 2020
Ny "We're staying home today," (Mijanona an-trano izahay androany) hira efa tamin'ny 2017, nohirain'ilay tarika Hadn Dadn avy ao Maosko, no nambabo ilay firenena izay miala am-pitandremana fatratra amin'ny fihibohana
Nitaraina ilay vehivavy mpikambana ao amin'ny Kongresy Hondiorana fa nosakanana tamin'ny fivoriana virtoaly izy
Amerika Latina22 Mey 2020
Ao anatin'ny fotoanan'ny COVID-19 sy ny fihibohana, mety hanimba ny dingana ara-demokratika amin'ny alalan'ny tsy fahombiazana tsotra izao na ny teti-dratsy ny fampiasana ny teknolojia izay manolo ny fivoriana hifanatrehan'ny olona.
Diarin'ny COVID-19 avy ao Wuhan : « Vita ihany ny mivelona amin'ilay valanaretina, fa tsy telina ny fanilikilihana, ny tahotra ary ny fankahalàna. »
Azia Atsinanana21 Mey 2020
Ho takalon'ny fahafahany mivezivezy rehefa vita ny fihibohana dia tsy maintsy mataon'ny olona ny tatitra momba azy ireo amin'ireo solotena isam-bohitra sy amin'ireo manampahefana ara-pahasalamàna.
Norarana nandritra ny 30 taona, hita amin'ny YouTube ankehitriny ny filma haiady tokana an'i Singapaoro
Nandritra ny taona maro no nitehirizan'ilay mpiantsehatra voalohany Peter Chong ny kopia tokana tao amin'ny vata fampangatsiahana
« Rehefa maty, dia maty» : ny COVID-19 sy ny fanokafana indray ny toekarena ao Jamaika
Karaiba20 Mey 2020
Miaraka amin'ny fialàna amin'ny fihibohana, hiverina amin'ny andavanandro ny toedraharaha. Tsy mino aho hoe ho « andavanandro vaovao » io, fa dia andavanandro fotsiny
Noho ny ady ataon'i Tonizia amin'ny Covid19, voatohintohina ny fahalalahana maneho hevitra
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana20 Mey 2020
Roa ireo bilaogera nosamborina satria niampanga ireo manampahefana any an-toerana ho nanao kolikoly mifandraika amin'ny fitsinjaràna ireo fanampiana, raha iray kosa mpanao gazety miatrika ompa sy fanivaivàna ety anaty tambajotra satria nanakiana ny minisitry ny fahasalamàna.
Vehivavy maka habaka iray nandritry ny fetibe Oruro tao Bôlivia
Amerika Latina20 Mey 2020
Voahilika hatry ny ela tsy ho afaka mandray anjara amin'ny fetibe, takian'ireo vehivavy sy ireo olona tsy an'ny atsy na ny aroa ny toeran-dry zareo.
Momba ny Rising Voices
Mediam-bahoaka20 Mey 2020
Mikendry ny hanitatra ny tombontsoa sy hanatratra ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra manerantany amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ireo mpikatroky ny fampitam-baovao an-tserasera manerana izao tontolo izao ary hanohana ny hevitr'izy ireo tsara indrindra ny Rising Voices.